Nhazi nke isi ịsa ahụ - Akụkọ - Ningbo Huanyu Sanitary Ware Co., Ltd
Nhazi nke isi ịsa ahụ
1) Dị ka ọnọdụ ntinye mmiri si dị, e nwere ụdị isi atọ: n'elu mmiri ịsa ahụ, ịsa ahụ aka na mmiri ịsa ahụ n'akụkụ.
Ụlọ ịsa ahụ a na-eji aka bụ ihe kwesịrị ekwesị maka ezinụlọ ọ bụla, ọ bụkwa nke a na-ejikarị eme ihe. Enwere ike iji ya mee ihe maka ịsacha site na ijide ya n'aka, ma ọ bụ tinye ya na oghere ma ọ bụ oche na-amị amị.
2) Kewara site na ihe onwunwe: Enwere ihe atọ a na-ejikarị ịsa ahụ, ya bụ ABS engineering plastics, ọla kọpa na igwe anaghị agba nchara. Plasticisi mmiri mmiri: Ndị isi ịsa ahụ ABS ugbu a bụ ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ahịa, yana òkè nke ihe dịka 90%. Kacha nkịtịisi mmiri mmiribụ nke ihe a. Igwe mmiri plastik ABS nwere ụdị dị iche iche na ọgwụgwọ ọdịdị dị iche iche, a pụkwara ịmepụta ya n'ime ọrụ dịgasị iche iche, nke dị ọkụ ma dị mma iji. Ọla kọpaisi mmiri mmiri: N'ihi nsogbu ego na nhazi, enwere ụdị ole na ole na ụdị dị mfe. Ọrụ ndị bụ isi otu ọrụ, na ha dị arọ na adịghị mfe iji. Ka ọ dị ugbu a, enwere mmiri ozuzo ọla kọpa dị ole na ole n'ahịa, a na-ejikarị ha eme ihe maka ọgwụgwọ elu PVD. , E nwere ọtụtụ mba ọzọ karịa ndị obodo. Isi igwe ịsa ahụ igwe anaghị agba nchara: Ọ na-esiri ike ime styling karịa isi ịsa ahụ ọla kọpa. The ọrụ bụ isi otu ọrụ, otú style na nlereanya isi dịkwa nnọọ mfe. Otú ọ dị, isi igwe igwe anaghị agba nchara nwere uru 3: 1. Enwere ike ime isi mmiri ịsa ahụ buru ibu na oke ịsa ahụ dị ogologo. Hekuan nwere ike ịbụ ihe karịrị otu mita, a na-ejikarị ya eme ihe na ụlọ ịsa ahụ nke ụlọ oriri na ọṅụṅụ dị elu ma ọ bụ ụlọ elu. 2. Enwere ike ime ka ịsa ahụ dịkwuo oke, akụkụ kachasị mkpa bụ ihe dịka 2MM, nke nwere ụfọdụ ịma mma na omume. 3. Ọnụ ego ahụ dị ala karịa nke mmiri ozuzo ọla kọpa, ya mere igwe anaghị agba nchara nwere ụfọdụ ahịa chọrọ gbasara ọla kọpa.
3) Dị ka ọrụ nke ntinye mmiri si dị: enwere ike kewaa mmiri ozuzo n'ime otu ọrụ na-arụ ọrụ na mmiri ozuzo ọtụtụ ọrụ. Ụzọ ntinye mmiri a na-ahụkarị gụnyere mmiri ịsa ahụ, mmiri ịhịa aka n'ahụ, mmiri na-egbuke egbuke (nke a na-akpọkwa mmiri columnar / mmiri dị nro), mmiri na-agba mmiri na mmiri agwakọta (ya bụ mmiri ịsa ahụ + mmiri ịhịa aka n'ahụ, mmiri ịsa ahụ + mmiri ịgba mmiri, wdg), na mmiri oghere. Na-atụgharị mmiri, ultra-ezi mmiri, waterfall mmiri, wdg nnọọ iche iche mmiri tinyekwa ụzọ. N'ụzọ bụ isi, mmiri ịsa ahụ niile nwere mmiri ịsa ahụ a na-ahụkarị. N'ime ụlọ ịsa ahụ dị iche iche na-arụ ọrụ ụlọ, ọrụ atọ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ ise bụ ndị kasị ewu ewu. N'ahịa ndị Europe na America, a na-enwekwa ọtụtụ ọchịchọ maka ịsa ahụ nwere ihe karịrị ọrụ 5, na e nwere ọbụna 9-ọrụ ịsa ahụ. N'ikwu okwu, ndị mba ọzọ na-eleba anya na mmiri ịsa ahụ. Aghụghọ.
4) Dị ka ihe mgba ọkụ ọrụ isi: tumadi toggle mgba ọkụ, pịa mgba ọkụ.
Enwere ọtụtụ ụzọ isi gbanwee, dị ka ntụgharị aka mgba ọkụ, mgba ọkụ na-atụgharị, mgbanaka mkpuchi ihu, wdg, mana isi ihe ka na-agbanwe agbanwe, pịa mgba ọkụ. Mgbanwe ngbanwe bụ usoro ngbanwe a na-ahụkarị na ahịa, na mgbanwe igodo bụ usoro ngbanwe kachasị ewu ewu n'afọ ndị na-adịbeghị anya. Ụdị niile a ma ama ewepụtala ya. Enwere ike iji otu aka rụọ ya, nke dị mfe ma dị mma.
Nke gara aga:Atụmatụ nlekọta isi ịsa ahụ
Osote:Ndụmọdụ maka nlekọta ịsa ahụ